Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka madasha qaran ee u dhaxeeyay hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa galabta oo Talaado ah lagu soo gabagabeeyay caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Hoggaamiyaasha dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay xilliga ay dhawaan baahiyeen guddiga doorashada oo ay doorashooyinka dhacayaan.
War-murtiyeedka madasha kasoo baxay wuxuu u qornaa sidaan:
Madasha Hoggaanka Qaran ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho 02 – 09 Agoosto 2016ka. Kulanka waxaa shir-guddoominayay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka soo qayb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Federaalka, iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedada Dalka.
Madashu waxay dhameystirtay, magacyada xubnaha Guddiyada Doorashada ee heer Dawlad Goboleed (GDHGDG).b. Madashu waxay soo saartay tirada iyo magacayada xubnaha guddiga khilaafaadka, waxayna ka dhigtay tirada 21 xubnood halka ay markii hore ka aheyd 11 xubnood. Sagaal (9) ka mid ah guddiga waxaa soo magacaabeysa Dowladda federaalka ah, halka ay min laba (2) xubnood soo magacaabayaan Dowladaha xubnaha ka ah ama ka mid noqon doona Dowladda Federaalka ah.
Arrimaha Haweenka Musharixiinta ah ee u Tartamaya Labada Aaqala. Sidoo kale, waxay madashu ku adkeynaysaa odayaasha dhaqanka iyo guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha soo socda:
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka, isagoo la tashanaaya odey dhaqameedyada beelaha Banaadiriga ee ku jira liiska 135ta oday dhaqameed iyo nabad-doonnada beesha, waxaa uu soo magacaabayaa afarta (4) xubnood oo ah guddiga doorashada ee beesha Banaadirigab. Seddexda (3) Oday dhaqameedyada Banaadiriga ee ku jira liiska 135ta oday, iyagoo la tashanaaya Raisul Wasaaraha Xukuumadda iyo Guddiga Doorashada beesha Banaadiriga, waxa ay soo xulaayaan 21 Ergo-doorasho oo ku saleysan toddobo beel hoosaad oo min saddex xubnood ah (7X3=21).
Doorashada halkii kursi ee Golaha Shacabka waxaa ay ansaxeysaa marka ugu yaraan labo musharax ay u tartamaan.b. Madasha waxaa ay go’aamisay in 51 ergada u codeyneysa halkii kursi ee Golaha Shacabka ay dhammaantood goobjoog ku noqdaan xarunta doorashada ka dhaceyso si ay u codeeyaan.
October 2, 2016 Taliyaha haayada nabadsugida NISA ee DFS oo 1,500 oo ciidamo ah shaqada ka cayriyay